Itoobiya Iyo Maraykanka oo wada-hadallo yeeshay (Warbixin) – Bandhiga
Itoobiya Iyo Maraykanka oo wada-hadallo yeeshay (Warbixin)
War qoraal ah oo laga soo saaray xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa lagaga hadlay kulan khadka telfoonka ku dhexmaray Ra’iisul wasaaraha Itoobiya iyo xoghayaha wasaaraddaasi ee Washington Michael R. Pompeo.
Warbaahinta dowladda Maraykanka oo warkani baahisay waxaa ay sheegtay in marka hore Pompeo uu raysal wasaare Abiy uu ugu hambalyeeyay abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize.
Wasaaradda ayaa adkeeysay ahmiyadda ay leedahay xoojinta xiriirka dowladaha Maraykanka iyo Itoobiya, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Washington.
Waxaa sidoo kale lagu xusay taageeradda Washington ee dib u habeynta taariikhiga ah ee Itoobiya.
Labada dhinac ayaa isla soo hadal qaaday rabashado dhowaan ka dhacay gobolka Oromada oo ay dadi ku dhinteen, waxaana ay isla garteen soo afjaridda isku dhacyada qowmiyadaha Itoobiya oo soo noqnoqday.
Arrimaha kale oo laga wada hadlay waxaa kamid ah arrinta gobolka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ayaa waydiistay wasiirka koowaad ee xukuumadda Addis Ababa in uu taageero fuinta qorshaha Dowlad Midnimo Qaran ah oo ka hirgasho dalka Suudaanta Koonfureed iyo Heshiiska Nabadda.
Wada hadalkan ayaa imaanaya xili Itoobiya ay xaqiijisay in tobanaan ruux ay ku naf-waayeen mudaaharaadyo ay kasoo cusboonaadeen Itoobiya markii ciidamada hareeyeen hoyga Jawar Maxamed, oo u ololeeya xuquuqda Oromada.
Jawar Maxamed, oo degan Mareykanka kana mid ahaa raggii ugu dambeeyay ee soo laabtay markii uu xilka la wareegey Abiy ayaa horkacayey banaanbaxii xilka looga tuuray ra’iisul wasaarihii hore ee Itoobiya.